Apple afaka nandavaka teknolojia 32-bit niaraka tamin'ny iOS 9 | Vaovao IPhone
Ny kinova manaraka ny rafitra fiasan'i Apple dia manomboka miantso mafy ao amin'ny faritry ny developer Apple. Ny vaovao mitsambikina ankehitriny dia ny iOS 9 dia mety hidika fa namolavola rafitra miasa i Apple esory ny fitaovana mandeha amin'ny haitao 32-bit, toy ireo maodely iPhone 5 sy 5C ihany koa.
Ity fanovana mety hivoatra hananganana tsimok'aretin'ny iOS 9 ity dia hidika ho fanatsarana bebe kokoa amin'ny fahombiazan'ny rafitra fiasa, satria ny rafitra 64-bit izay tsy nila nanisy fanampiana 32-bit dia hitondra fitomboana amin'ny fitoniana, ny hafainganana ary ny fahatokisana azy. Ny risika dia izany angamba aloha loatra hitazonana ireo fitaovana miaraka amin'ireo mpampiasa marobe tsy ho ao amin'ny kinova iOS vaovao. Ireo fitaovana ireo dia miasa miaraka amin'ny chips A6 sy ambany, izay manana teknolojia 32-bit hahatonga azy ireo tsy hifanaraka amin'ny rafitra vaovaon'i Apple.
Amin'ity fanavaozana ho avy ity, ny kinova vaovao manaraka an'ny iOS dia hoferana ho an'ny maodely mini iPad 2, iPad Air 1 sy 2, iPhone 5S, iPhone 6 ary iPhone 6 Plus. Hamela modely tena ankehitriny, miaraka amin'ny mpihaino mpampiasa marobe, noho izany ny loza mety hitranga amin'ny fandinihana ireo fitaovana 32-bit. iPad 2, iPad Mini na ny iPhone 5 sy 5C nitarina dia tsy ho tafiditra amin'ireo afaka mankafy ny iOS 9 vaovao.
Ireo chip ao amin'ireto fitaovana "avela" ireto dia mifototra amin'ny maritrano 64-bit, manome fahombiazana avo lenta kokoa ary miresaka fanampiana ho an'ny RAM mihoatra ny efatra gigabytes. Ny processeur ampiasain'ny Apple for iPhone 6 sy ny sisa amin'ireo fitaovana izay afaka mankafy ny iOS9 dia manana maritrano miorina amin'ny Cyclone ary antenaina fa ireo poti-bola ho avy izay hampiasain'izy ireo ao Cupertino hahatratra fampisehoana saika avo roa heny noho ny ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Apple dia afaka nandavaka teknolojia 32-bit tamin'ny iOS 9
NP: xeahnotto dia hoy izy:
Momba inona izy ireo? Ny fitaovana tsirairay dia nandalo kinova 4 an'ny iOS foana. Ny 3GS dia nanomboka tao amin'ny iOS 3 ary nifarana tamin'ny 6. Ny 4 dia nanomboka tamin'ny 4 ary nifarana tamin'ny 7. Ny 4S tamin'ny 5 ary nifarana tamin'ny 8… Ary ankehitriny ny 5 / 5C dia mandalo fotsiny ny kinova 3 an'ny iOS? Na dia eo aza ny mahay ampy? Na izany na tsy izany, ny iOS 9 miaraka amin'ity dia ny fahafatesan'ny iPhone 5. Na manao ahoana na manao ahoana ny fahitanao azy, dia hita fa nandray tolotra tamin'io maodely io i Apple ... Na dia esoriny aza ny fanavaozana dia ho vitany ny manao telefaona misy ondrilahy 1Gb toa ireo maodely taty aoriana, GPU iray ampy ahafahana manatanteraka ny effets blur sy parallax rehetra, ary manana CPU ampy hanokafana Apps ao anatin'ny iray segondra ... Amin'ny iPhone 4 miaraka amin'ny iOS 7! Tsy mampahafantatra fa nividy iPad izay ananako izao aho. Tena adala.
Apple dia manao hetsika rehetra voalaza eto ary esoriko ny ekosistia ao amin'ny 0,0000000000000000000000000000000000000000000001 femtoseconds.
Valio amin'i NP: xeahnotto
TSIA: xeahnotto dia hoy izy:
Raha ny fanazavana dia tsy voamariky ny olona foana ... Fa ny iPod touch 5g sy ny iPad 3 sy 4 hafa mitovy. Mampalahelo be…
Valiny amin'ny TSIA: xeahnotto
Ursids dia hoy izy:
Ny marina dia ity vaovao ity, ny tena manaitra ahy, dia ny ela vao nivoaka. Raha volana vitsivitsy lasa izay dia nampitandrina ny mpandraharaha izy ireo fa tokony ho 64-bit ny fampiharana hatramin'ny febroary izao, dia tsy nanantena zavatra hafa aho.
Rehefa nivoaka ny Megadrive 16-bitika, iza intsony no hampivelatra lalao ho an'ny 8-bit? Izy io dia fitsambikinana amin'ny teknolojia, izay mitovy amin'ny 64 bit ny birao imac ary azo antoka fa hifanaraka kokoa ireo fitaovana eo anelanelan'ny iOS sy OSX.
Mbola manohy ny iPhone 4 aho (5 taona hisy izany), ary tsy mila iOS8 mihitsy aho, dia mamoaka ny iOS tadiavin'izy ireo mandritra ny fotoana mety amiko (krizy mihosin-dra).
Ny nataoko tamin'ny volana oktobra dia ny fahazoana ny "mora indrindra" A7 (64-bit) eny an-tsena, ny iPad mini 2 32GB (Miaraka amin'ny 16GB dia tsy handeha ho aiza koa isika) (maodely faramp 2013).
IPad inona no novidinao mpiara-miasa?
Mamaly an'i Ursidos
Soso-kevitra: milalao mozika na horonantsary rehefa lasa ny fotoana iray
Ity no tranga NueVue ho an'ny iPhone 6, tazomy hadio sy voaro hatrany ny findainao